Ukuthengisa kwi-Intanethi: Ukufumana iiThemba zakho zokuThenga iiThemba | Martech Zone
Owona mbuzo uqhelekileyo ndiwuva kukuba: Wazi njani ukuba ngowuphi umyalezo oza kuwusebenzisa kwiphepha lokufika okanye umkhankaso wentengiso? Umbuzo ofanelekileyo. Umyalezo ongalunganga uya koyisa uyilo olulungileyo, ijelo elifanelekileyo, kunye nokunikezelwa okuhle.
Impendulo, ewe, ixhomekeka ekubeni liphi ithemba lakho kumjikelo wokuthenga. Kukho amanyathelo amane aphambili kuso nasiphi na isigqibo sokuthenga. Ungazi njani ukuba liphi ithemba lakho? Kuya kufuneka uchonge ezabo ukuthenga izinto ezibangela.
Ukuze simbe kwezi zinto zibangela ukuthenga, masisebenzise umzekelo esinokuthi sonke sihambelane nawo: Ivenkile ezivenkileni.
Ukufunda malunga nokuthenga okubangela iMall
Amava amahle okuthenga asevenkileni. Bahlala nje benobuchule bokukuguqula ukusuka ekubhaduleni, komphefumlo olahlekileyo kumthengi. Ke masijonge indlela abanxibelelana ngayo nawe kwaye sifunde izifundo ezimbalwa malunga nokuchonga izinto ezibangela ukuthenga.
Cinga ukuba ubona ivenkile ongazange waya kuyo ngaphambili, kwaye uhlale ngaphandle xa uyijongile. Mhlawumbi usemall ujonge umqondiso uzama ukuqonda ukuba ngoobani kwaye benza ntoni. Ngaphambi kokuba wenze ukhetho lokuzibandakanya neshishini elithile, ngokuqinisekileyo ukubhadula.
Ixesha elinamandla, kodwa kulungile ukuba uchaze loo nxalenye yokuqala yayo nayiphi na indibaniselwano. Eli gama lisebenza kubantu abeza nje kwiwebhusayithi yakho baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde khona; Igama 'isantya sokuxhamla phezulu' lisetyenziselwa ukuchaza oku kwenzekayo. Zezi Abathandi, nkqu namathemba okwenene okwangoku. Bangabantu abeza nje kuhlobo lokuxhoma, kwaye ke siqala ukukhula ngabathengi ngesi sigaba.
Indlela yokuNxibelelana noMntu oLinganayo: “Funda ngakumbi”
Elona nyathelo lokuqala lokubizela inyathelo nakweliphi na icebo lokuthengisa nokuba lelona themba lingafanelekanga Funda nzulu. Esi simemo sisisiseko senzelwe ukuba sibe lelona nqanaba lisezantsi lokuzibophelela onokuthi ulicele kwithemba-lichithe nje ixesha elithile ukufumana okungakumbi.
The Funda nzulu Ukubizela inyathelo yenye yezona ndlela zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwi-Intanethi ukufumana ithemba lokubonelela ngolwazi. Lonke urhwebo lomxholo ngokuyintloko a Funda nzulu qhinga. Nawuphi na umnikelo wasimahla ofundisa ithemba lakho ngento ababengayazi ngaphambili yi Funda nzulu ukubiza isenzo.
ezi Funda nzulu ukubiza-kuthatho inyathelo kunokuchazwa ngokunxulumene nento oyifundisayo. Umzekelo, CrazyEgg iwebhusayithi uthi Ndibonise iMephu yam yobushushu eyona nto ifundisa ithemba labo into entsha ababengayazi ngaphambili.
Into ebangela ukuba uthenge umntu ophendulayo kweyakho Funda nzulu ukubiza isenzo. Baphakamisa izandla kwaye bakunika imvume yokuqhubeka nokuzithengisa.
Gcina ukhumbula ukuba ithemba lakho liyaphendula kuba bafuna ukufunda okuthile-ke musa ukufihla izinto zokuthengisa ngasemva Funda nzulu ukubiza isenzo. Ukuba ucinga ukuba ithemba lakho lilungele ukuthenga, banike Thenga ngoku okanye a yilungise ukubiza-kumanyathelo okungaphezulu ngakumbi ngokuhambelana nokulindelweyo kwabo.
Isifundo: Ufuna into icacile kwaye inesibindi Ukuchaza into oyiyo ku Loiterer.
Masicinge ukuba into ethile malunga nevenkile ikutsalile. Le yindawo apho ungena khona evenkileni kuba uzama ukufumana ukuqonda okwenzekayo okanye abathengisayo.
Uyazi ukuba kwenzeka ntoni emva koko. Umthengisi uza kuwe akubuze ukuba ikhona into oyifunayo. Impendulo yakho iphantse yazenzekelayo,
Ndijonge nje. ”
Ndibiza oko a Jonga.
Umntu oqala nje ukubandakanyeka kwishishini lakho kodwa engazi ncam nokuba awunayo into yokuthenga ujonge nje.
Kodwa bajonge nje kuba khange bayiqonde into abayifunayo okanye abayifunayo. Kungumsebenzi wevenkile ukubeka yonke into ngendlela onokuzifumanisa ngayo, kuba ngekhe ubandakanyeke nomthengisi okwangoku.
A Jonga unomdla wokwenyani kwimbonakalo yokuqala. Izinto zinemvakalelo kwaye zibonwa kweli nqanaba. Kungenxa yoko le nto ivenkile ibeka ibhedi yabo ngaphandle ngombhede, iindawo zokulala ebusuku, kunye nefenitshala- ukuze uyiqikelele ekhayeni lakho.
Abagcini nje ngokubeka iibhedi phezulu eludongeni kwaye bakwenza uhambe ngazo.
Nawe kuya kufuneka uncede Jonga baba nombono wobomi babo emva kokusebenzisa imveliso okanye inkonzo.
Umthengisi ozibandakanya kwangethuba kakhulu-kwaye ngamandla kakhulu- kweli nqanaba akazukukhula abathengi. Baza kubagxotha.
Kodwa okona kubaluleke nangakumbi, ngaphandle kokuba banokuzicingela bephuma nento kuloo venkile, bazakuhamba kungekudala. Ixesha labo lixabisekile kwaye ngaphandle kokuba into enje kule venkile inefuthe, baya kuqhubeka.
Ungazibandakanya njani noMjongi: "Ubomi obungcono"
Oku kubizela inyathelo lelona liqhelekileyo kuthi kwiintengiso zeTV. Kuba akunakufane uvuke ebhedini yakho uyokuthenga into ngoko nangoko, uninzi lweemveliso ezinkulu zizama ukukwenza uzive ungcono ngokuthenga imveliso yazo - xa ekugqibeleni ujikeleze kuyo.
Cinga phantse yonke intengiso yebhiya okhe wayibona. Uya kuba sexier, ukuba nabahlobo abaninzi, ucebe…. ufumana umbono.
Ngokuqinisekileyo, ubomi obungcono isombulula ingxaki, ayisiyiyo enye oyichongileyo okwangoku.
Isicwangciso sentengiso apha kukuthengisa nje imveliso njengokudala ubomi obungcono- nokuba kuthetha ntoni na kumthengi wakho ogqibeleleyo. Ke, le fowuni-yentshukumo ijolise kwi waziva iimfuno, into oyifunayo, kodwa khange uthethe ngomlomo okanye ukhe ucinge ngayo okwangoku. Isebenza kwinqanaba leemvakalelo.
The Jonga Uphendula kakuhle kwi ubomi obungcono biza-uthathe inyathelo kuba bafuna le nto uyibonisayo-nangona bengakhange bacinge ukuba bayayifuna ngaphambi kokuba badibane nawe. Yindlela ebaluleke kakhulu yokunceda ithemba lakho lokuchonga intswelo yabo-nokuba ayithethwanga.
Sukucinga ukuba oku kubizelwa inyathelo kuluncedo kuphela kwintengiso yeTV. Kukwabalulekile kwintengiso ethe ngqo.
Ukuba ithemba lakho alazi kwangoko okanye likholelwa ukuba banesidingo esijongana naso, kuya kufuneka ubonise ukuba imveliso okanye inkonzo yakho iyakubenza njani ubomi obungcono.
Kuxhomekeka ekubeni uqiniseke njani ngokukhawuleza ukuba unakho ukubonelela ngobomi obungcono, unganakho Fumana uBomi obungenaXinzelelo or Ukuchitha imali ngakumbi ukubiza isenzo. Oku kuthengisa ngokuthe ngqo kwintengiso yeebhiya
Ukuqala kokuthenga apha kuyaphendula kwifayile yakho ubomi obungcono ukubiza isenzo. Ngokuphendula kuloo nto, baphakamise izandla kwaye babonisa ukuba bayayifuna ngenene le nto uyibizayo. Ewe abanalo nofifi lokuba lusebenza njani okanye lubiza malini; usafuna ukufumana ilungelo lokuvala intengiso, kodwa okwangoku, ukwindlela elungileyo.
Isifundo: Kuya kufuneka upeyinte umbono kwi Jonga nenkcazo yendlela onokuthi ngayo batshintshe ubomi babo.
Ukukhangela kwiVenkile yeVenkile
Ngoku khawufane ucinge ukuba ujonge kule venkile intsha kraca kwaye ngequbuliso kukho into ekutsalayo.
Uyabona ukuba yinto onokuyithanda okanye oyifunayo. Le inokuba yindawo apho unokukhetha into eshalofini, uyivavanye.
Okwangoku uthelekisa kwaye uthelekise. Ujonge ixabiso, ujonge itaki kwaye ujonge kokukuyo.
Ngoku uyi shopper kufuneka, uzibandakanye ngokwenyani kwaye ukulungele ukwenza isigqibo malunga nokuba le yinto oyifunayo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngaphambi kweli nqanaba, ngekhe ubenomdla kwincoko nomthengisi. Kwaye ngekhe ube nomdla kwiimpawu zemveliso.
Ivenkile inokuqala ukuzibandakanya nayo Abathengisi ngokwenza kube lula ukulungelelanisa iimfuno zakho kunye nezibonelelo zeemveliso zabo. Yenza kube lula ukuyifunda, ifumaneke lula.
Ngcono okwangoku, bonelela ngezixhobo ezenzelwe wena kunye neenkonzo ezinxibelelanisa iimfuno zakho kunye nezibonelelo ozibonisayo. Eyona nto ibhalwe ngabantu, ngcono.
Ukunxibelelana noMthengi: "Yilungise"
Phambi kokuba into ikulungele ukuthenga, bahlala befuna ukulungisa iingxaki zabo- yeyiphi enokuthi ibakhuthaze ukuba bathenge.
The yilungise Ukubizela inyathelo kulungiselelwe ukuba ingxaki yethemba lakho ihambe.
Isihluma esheshayo inkulu yilungise umnxeba-wezenzo kwiphepha labo lasekhaya.
Bachonga ingxaki: awunayo itrafikhi eyaneleyo.
Ufuna ukuyilungisa? Emva koko sayina.
The yilungise Ukubizela isenzo kunokukhokelela kwintengiso, kodwa amaxesha amaninzi kuyandulela.
Uya kubona amashishini amaninzi esebenzisa ifayile ye- yilungise umnxeba-to-action phantse kwangoko. Kulungile ukuba ingxaki ozama ukuyisombulula icacile ukuba ifuna ukwaziswa.
Kodwa kubanini bamashishini abaninzi, loo ngxaki inokungaziwa. Amaxesha amaninzi ithemba lethu liyayiva intlungu, kodwa andazi ukuba ivelaphi le ntlungu. Ukuba ufumanisa ukuba kufuneka uchaze loo nto kwithemba lakho, unokuba utsibela kwi yilungise biza-uthathe amanyathelo ngokukhawuleza.
The shopper kufuneka uyazi ukuba yintoni ingxaki yakhe kwaye ufuna ukuba ilungiswe. Naluphi na ulwimi olumkhuthaza ukuba alungise le ngxaki luyafaneleka.
Yifowuni eyomeleleyo yokwenza isenzo kwaye ihlala isetyenziselwa ukufumanisa ukuba loluphi uhlobo lwethemba onalo kunye nendlela onokubanceda ngayo.
Ngokuqhelekileyo, yilungise ukubiza-kuthatho-nyathelo kuza ngokwamaqela ngethemba lokukhetha elihambelana nemfuno yabo. Apha, isicwangciso-qhinga sentengiso kukuhlela amathemba ngamacandelo okudinga ukuze ubakhombe kwicala lesisombululo esifanelekileyo.
Isizathu sokuthenga apha siyasebenzisana nesakho yilungise ukubiza isenzo. Ngokucofa kuyo, ithemba lakho liphakamisile isandla kwaye labonisa, ewe, banayo le ntlungu uyichazayo kwaye bafuna indlela yokuba ihambe. Ngoku lixesha lokuxoxa ukuba uyenza njani loo nto.
isifundo: Kufuneka ubonise ifayile ye iinzuzo kwimveliso yakho okanye kwinkonzo ngendlela engqinelana nesidingo sakho shopper kufuneka -Inyani nje ngeli nqanaba, kodwa kungekudala.
Ufuna uncedo kwincoko yentengiso ekufuneka ilandele yilungise ubiza isenzo? Khuphela le Shicilelo yasimahla yokuThengisa iTikiti kwaye ugcwalise izikhewu ukuvala izivumelwano zenkonzo yamatikiti aphezulu:
Khuphela iSkripthi seNtengiso esiPhakamileyo
Isihloko kwiRejista yeCash
Ukuba eso sigqibo silungile, ithemba lakho liya kusuka ekubeni shopper ukuya kwi umthengi.
Umthengi ngumntu olungeleyo ukuthenga.
Kulapho ukuthengisa kwahlula abaphumeleleyo kwaboyisiweyo. Uziva njani evenkileni xa sele ukulungele ukuthenga kodwa ungayifumani irejista yemali? Okanye okubi, uyayifumana, kodwa akukho mntu unokukunceda apho?
Ngaba ukhe waphuma evenkileni kuba ungakwazanga ukuthenga le nto ubuyifuna?
Abathengisi abenza ukuba kucace ukuba bayayifumana irejista yemali benza kakuhle. Nokuba ikwindawo ecacileyo okanye ukhatshwa ngumthengisi oza kukusa khona buqu.
Nantoni na eyenye kukusilela kwamava. Awungekhe ukhule abathengi ukuba abakwazi ukuthenga kuwe.
Oku kunokucaca ukuba unendawo ye-ecommerce. Kodwa ngamanye amaxesha iimveliso zethu okanye iinkonzo zifuna amanyathelo ambalwa ukuvala isivumelwano.
Ukuba kunjalo, musa “ukuyifihla irejista yemali.” Qinisekisa ukuba ithemba lakho liyayazi indlela yokuba ngumthengi.
Ukunxibelelana noMthengi: “Thenga ngoku”
Olona fowuno luchanekileyo noluthe ngqo lolona lindele ukuba nethemba lokuba likhuphe isipaji sabo: Thenga ngoku!
Ungabona Thenga ngoku kubhalwe iindlela ezahlukeneyo kwiindawo ezahlukeneyo zemveliso. Kwikhathalogu ye-e-commerce, ukubiza isenzo kunokuthi kuqala "Yongeza kwinqwelo." Kodwa ngokusisiseko, sicela ithemba lokuthenga into abayongeza kwinqwelo yabo.
Ngamanye amaxesha, Thenga ngoku inokubhengezwa ngokwemveliso ojonge ukuyithenga. Njengokuba ube lilungu okanye Yakha iSicwangciso sam. Olu hlobo lwamagama lubaluleke ngakumbi kwaye lujolise kwimeko kwaye lunokuphakamisa impendulo ngokwenza isicelo sibe sesakho.
Ngamaxesha athile Thenga ngoku ayibandakanyi imali, kodwa endaweni yoko ifuna ukuba uqalise ngemveliso simahla. Oku kwahluka kuqhelekile phakathi kweemodeli zeshishini ze "freemium", iimveliso ezinamaxesha okulinga simahla, okanye isiqinisekiso sokubuyiselwa imali.
Kuzo zonke ezi meko, Thenga ngoku ukubizela inyathelo kujolise kwinto ekulungeleyo ukuzibophelela.
Kuxhomekeke kwimveliso okanye kwinkonzo yakho, oku kungathatha ixesha ukuphuhlisa. Kwimeko ye-e-yorhwebo, uhlala umsebenzisi evela Loiterer ukuba umthengi ngokukhawuleza okukhulu, ke ngeza kwitshathi kwaye Inqwelo yokuthenga Yenza ingqondo.
Kodwa ngamanye amaxesha, kuya kufuneka wakhe ukuthembana ngethemba lakho kunye Thenga ngoku ukubizela-isenzo kwintsebenzo yokuqala kakhulu kakhulu, ngokukhawuleza.
Endaweni yoko, yakha isicwangciso-qhinga sentengiso esakha ukuthembana kuqala, emva koko ubhambise nge Thenga ngoku ukubiza-kuthathe inyathelo emva kokuba ithemba libonakalisile ukuba bahambile kuwo onke amanqanaba okuthenga.
Isizathu sokuthenga apha sesona sigqibo sokuthenga; ukucofa i Thenga ngoku iqhosha. Ewe, njengoko uyazi, umsebenzi wakho awugqitywanga. Kufuneka ube nenkqubo yokuthengiselana ecocekileyo, ecekeceke, uphathe nayiphi na inkcaso yokugqibela, kwaye uyizalisekise ngendlela eyenza kube lula ukwenza ishishini nawe.
Amashishini amaninzi onakele ngenxa yemigca emide “ekhawuntareni yokuphuma” - nokuba awunayo ivenkile ebonakalayo.
isifundo: Kufuneka uchaze indlela yokuqhuba ishishini yakho umthengi; Cacisa malunga nokuba ungayithenga njani imveliso yakho kwaye uyenze ngokufanelekileyo.
Ukudibanisa zonke iiCall-to-Action ezi-4 zokufumana iiNjineli zokuthenga
Ngamnye umnxeba wokubizela isenzo kufuneka usetyenziswe kunye nabaphulaphuli abafanelekileyo. Sakha ukuthembana kunye nokuthembeka- kancinci - ngonxibelelwano ngalunye okanye isiqwenga somxholo. Kuya kufuneka utshatise umxholo kunye nokubiza isenzo.
Kubi kakhulu ukubizelwa kwinyathelo kwangoko kwinkqubo njengoko kunjalo nokuvumela ithemba lakho ukuba libuyise isilayidi.
Sukukhuthaza umthengi wakho ukuba athenge aze emva koko alandele inkqubo ye- Funda nzulu ukubiza isenzo.
Le nkqubo yokuhamba isuka Loiterer ngokusebenzisa Jonga, Ukuya shopper kufuneka, Ukuya umthengi yinto endiyibiza ngokuba yimfuduko. Kukukwazi ukubanethemba lokukhetha ukuzibandakanya neshishini kwinqanaba elinzulu nelinzulu de bakhethe ukuba ngumthengi.
Ngandlela thile, awukhuli abathengi-bayaziphuhlisa. Konke onokukwenza kukubanika into abayifunayo-kanye xa beyidinga-kwaye babone umqondiso wokufuduka-izinto zokuthenga-ezikhawulezayo xa zisenzeka.
Njengoko ufunda ukusebenzisa nganye yeefowuni ezi-4 zokuthatha isenzo kunye nabaphulaphuli abafanelekileyo, uya kufumanisa ukuba ukhokelela kwithemba lakho ngenkqubo yentengiso kakuhle nangokuthembela okuphezulu.
tags: ngeza kwitshathiThenga ngokuUkuziphatha komthengiumnxeba kwisenzocrazyegge-commerceeCommercejongajongaababukeliukuthengisa onlineukuthengisa kwi-Intanethiihlumelo elikhawulezayoshoppershopper ukuya kumthengi